Xilli cusub oo loogu talagalay Delta Airlines iyo Korean Air: Boston oo duulimaad ku tagta Seoul marka hore
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Xilli cusub oo loogu talagalay Delta Airlines iyo Korean Air: Boston oo duulimaad ku tagta Seoul marka hore
Airlines • Airport • Andorra Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Shirkad cusub oo wada jir ah ayaa soo shaacbaxaysa oo u dhaxeysa shirkadda Korean Air iyo Delta Airlines ayaa soo baxaya, Bostonna door weyn ayey ku leedahay.
Adeeg cusub oo diyaaradeed oo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya Boston iyo Seoul ayaa la bilaabi doonaa Abriil 12, 2019 iyada oo lala kaashanayo iskaashatada wadajirka ah, Delta Air Lines.
Duulimaadka cusub ee Boston, oo ay weheliso Minneapolis / St. Adeegga Paul-Seoul ee Delta ay bilaabayaan sanadka 2019, ayaa ah waxyaabihii ugu horreeyay ee lagu daro isku-xidhka wadajirka ah ee shabakadda Seoul-Incheon tan iyo markii labada shirkadood ay bilaabeen iskaashigooda bishii Maajo.
John Jackson, oo ah madaxweyne ku xigeenka maareynta shirkadda Korean Air ayaa yiri "Marka la isku daro jadwalka shirkadda Korean Air iyo Delta, macaamiisheennu waxay awood u leeyihiin inay ku raaxeystaan ​​fursado safarro aan la soo koobi karin." "Wadajirkayaga wadajirka ah waa mid aan la dafiri karin oo ah wada-shaqeynta ugu xoogan waxayna siineysaa labada shirkadood ee duulimaadyadayada tartan adag."
Macaamiilku waxay marin ka heli karaan 290 safar oo ku teedsan Delta oo ku taal Ameerika iyo 80 safar oo Aasiya ah oo ay ku mari karaan duulimaadyada Kuuriya. Bishii Jannaayo ee la soo dhaafay, Kuuriya iyo Delta waxay isla degenaayeen qaybta ugu sareysa warshadaha ee Incheon Terminal 2, iyagoo xiriir ka samaynaya Aasiya iyo Ameerika qaar ka mid ah kuwa ugu dhakhsaha badan warshadaha.
Boston waa albaabka ugu weyn ee warshadaha tikniyoolajiyadda sare, Boston waa barta ugu caansan ee laga ilaaliyo Korea iyada oo dalabkeedu si xawli ah ugu sii kordhayo Aasiya, ayuu yiri Jackson Air Korea. Magaalada, oo leh jaamacado iyo kulleejooyin fara badan, waa xarun sii kordheysa oo ku taal New England oo soo jiidata shirkadaha ka shaqeeya warshadaha sida xawliga ah u koraya sida IT, teknolojiyada bio, daryeelka caafimaadka, maaliyadda iyo dawooyinka.
Korean Air iyo Delta ayaa maalgashanaya Boston, duulimaadkan cusub ee Seoul wuxuu ku darayaa xiriiriye muhiim ah oo ay wada-hawlgalayaasha JV ay siinayaan macaamiisha aagga Boston. Marka laga soo tago Seoul, socdaalayaashu waxay marin u heli karaan ku dhowaad dhammaan Aasiya oo ay leeyihiin Korean Air oo leh khibrad macmiil oo gaar ah ee Incheon's Terminal 2 oo muujineysa isku xirnaan hufan oo aan kala go 'lahayn iyo afar xarumood oo xarrago leh oo Kuuriyada Kuuriya ah, oo lagu daray qolalka kale ee loogu talagalay inay ku wareejiyaan rakaabka dhammaan qolalka leh qubeyska iyo meelaha hurdada oo dhameystiran .
Adeegga Boston-Seoul waxaa lagu shaqeyn doonaa diyaaradda cusub ee Korea Air ee cusub ee 787-9 Dreamliner oo leh lix qolal hurdada koowaad ee heerka koowaad ah, 18 qolal hurdo ganacsi oo heer sare ah, iyo 245 kursi oo heerka fasalka ah.
Fasalka Koowaad wuxuu ka kooban yahay cunnooyinka beeraha-duulista leh ee cuntada lagu beero beeraha shirkadda ee jasiiradda Jeju, kormeer heer sare ah oo 23-inch ah, duvet raaxo leh iyo gogosha, dharka raaxada ee duulimaadka ee Gianfranco Ferre, iyo xirmooyinka raaxada leh ee loo yaqaan 'DAVI' oo leh shan alaabood oo isku qurxin raaxo ah oo kala duwan. Macaamiisha fasalka koowaad sidoo kale waxay ku raaxeysan karaan faa'iidooyinka gaarka ah ee qolka nasashada ee gaarka loo leeyahay iyo qolka nasashada ee Fasalka Koowaad ee garoonka diyaaradaha ee Incheon.
Kuleylka 'Prestige Suites' ee Kuuriya waxay bixiyaan 21-inch gaar ah oo kuraas ballaaran oo ballac ah oo u dhexeysa 75 inji marka laga reebo marin marin toos ah. Onboard, macaamiisha Prestige waxay ku raaxaystaan ​​barnaamijka abaalmarinta ku guuleysiga ee Korean Air ee barnaamijka cuntada iyo khamriga iyo xirmada raaxada ee DAVI.
Dhanka kale, fasalka dhaqaalaha ee Korean Air wuxuu ka mid yahay kuwa ugu raaxada badan warshadaha, oo leh 33-34 inji inta udhaxeysa kuraasta, kormeer shaqsiyeed oo heer sare ah oo 10.6-inch ah iyo xulashooyin kaladuwan oo cunto ah.
Iyadoo ay bilaabeen magaalooyinka Boston iyo Minneapolis / St. Paul, Korean Air iyo Delta ayaa bixin doona ilaa 29 duulimaad maalintii inta u dhexeysa 14 irdood oo laga galo Mareykanka iyo Aasiya. Laga soo bilaabo Kuuriya oo keliya, wada-hawlgalayaasha wadajirka ah waxay bixin doonaan in ka badan 115 duulimaad toddobaadle ah oo tagaya 13 dal oo Mareykanka ah, koror ka badan 10% laga bilaabo xagaaga 2018. Marka la isku daro jadwalka labada shirkadood, macaamiisha waxay leeyihiin ikhtiyaarro safarro oo aan la mid ahayn iyaga oo ku raaxeysanaya faa'iidooyinka isdaba jooga ah ee soo noqnoqda.
Faahfaahinta jadwalka ee adeeggan cusub ayaa ka hooseeya, iyada oo boosas la furayo dhammaadka xagaaga.
Adeegga cusub ee aan duuliyaha lahayn ee Korean Air ee u dhexeeya Boston iyo Seoul:
Seoul 4:50 pm (maalinta xigta)
Talaado, Arbaco, Jimco, Sabti, Axad
Wuxuu bilaabmayaa Abriil 12, 2019
Seoul 9:30 subaxnimo
Boston 10:30 subaxnimo
Delta maalgashiga joogtada ah ee Boston wuxuu gaari doonaa 112 maalmood oo xagaaga ah marka laga baxo xagaaga 2018, kororka 19 bixitaan marka la barbar dhigo xagaaga 2017 iyo 29 bixitaankii xagaaga 2016. Delta iyo la-hawlgalayaasheeda waxay u adeegi doonaan 52 wadar oo duullimaadyo ah oo ka imanaya Boston, oo ay ku jiraan 18 dal oo caalami ah. Ku dhawaaqista maanta ee adeegga Seoul ee Kuuriyada Koonfureed waxay keenaysaa caymis aan joogsi lahayn oo ku saabsan gobol kasta oo safar caalami ah oo weyn. Delta waxay u heellan tahay inay kor u qaaddo khibrada macaamiisha ee Boston, waxayna bixisaa kuraas heer sare ah oo ka badan kuwa kale ee qaada shirkadaha fasalka koowaad duulimaad kasta laga bilaabo Juun. Delta Sky Club waxay ka shaqeysaa laba goobood oo ku yaal Terminal A, iyadoo macaamiisha siisa dhowr xulasho caafimaad iyo mid cusub iyo dhowr ikhtiyaarro cabitaan oo la isku halleyn karo oo ay ka mid yihiin biir farsameedka deegaanka ee loo yaqaan Samuel Adams iyo kafee Starbucks. Delta waxay bixisaa kuraasta sariirta jiifka ah ee Delta One dhammaan duulimaadyada Yurub, xulashada duulimaadyada Los Angeles iyo dhammaan duulimaadyada tagaya magaalada Boston lambarkeeda 1aad, San Francisco.
Ku saabsan Kuuriyada Koonfureed iyo Delta Joint Venture
Iyada oo duulimaadyada ugu sarreeya ee 27 ee u dhexeeya Mareykanka iyo Aasiya, iskaashiga wadajirka ah ee u dhexeeya Delta iyo Korean Air wuxuu macaamiisha siiyaa faa'iidooyinka safarka heer caalami ah ee ku teedsan mid ka mid ah shabakadaha marinnada ugu ballaadhan ee suuqa trans-Pacific. Wada-hawlgalayaashu waxay dhowaan ballaariyeen duulimaadyadii codeshare waxayna horaantii sannadkan heleen oggolaanshaha dawladda ee wadajirka trans-Pacific kaas oo kor u qaadi doona isku xirnaanta Mareykanka iyo Aasiya siinta macaamiisha xulasho dheeraad ah ee safarka aan xuduud lahayn Labada duulimaadba sidoo kale waxay hagaajiyeen barnaamijyadooda daacadda u ah faa iidooyinka isdhaafsiga, oo ay kujirto awooda ay ku kasban karto maylal badan labada barnaamijba kuna soo furan karto shabakada la balaariyay.
Shirkadda Dalxiiska ee Bonaire ayaa magacawday Dr. Robertico R ...